Warbixin: Tirada ciidamada la dilay & Qaraxyada ka dhacay Muqdisho bishan RAMADAAN |
Warbixin: Tirada ciidamada la dilay & Qaraxyada ka dhacay Muqdisho bishan RAMADAAN
Ururka Al-Shabaab ayaa xoojiyay weerarrada iyo dilal ay ka geesanayaan caasimada Muqdisho gaar ahaan bishan Ramadaan iyagoona ka jawaabaya hadal ka soo baxay madaxda dowladda kuwaasoo ku dhawaaqay barnaamij la baxay NABAD KU AFUR, kaasoo looga gun lee yahay in shacabka Soomaaliyeed ay bishan nabad ku afuraan.
Haddaba Shabaab oo fariintaas ka duulaya ayaa labo jibaaray weerarrada iyo qaraxyada ay ka geesanayaan magaalada Muqdisho.
Haddii aan soo koobno lixdii cisho ee la soo dhaafay bishan Ramadaan waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay ku dhawaad 30 qof oo u badan ciidamada dowladda, taasoo ka dhigan in maalintii la dilaayay seddax qof ama wax ka badan.
Waxaa kaloo magaalada ka dhacay in ka badan 10 weerarr oo uu ugu dambeeyay kii shaley ka dhacay afaafka hore ee baarlamaanka.
Dhinaca gobalada gaar ahaan goobaha dowladda ay ka arrimiyo waxaa laga soo sheegay weerarro iyo dilal ay geesteen Shabaab, waxaa ka mid ah Afgooye waxay ku dileen labo nabadoon mid kalena waa ay dhaawaceen bishan Ramadaan kaliya, Qoryooleey madaafiic ay ku garaaceyn waxaa ku dhintay dad shacab ah, Kismaayo waxaa ka dhacay bishan Ramadaan seddax weerarr qaar ka mid ah waxaa lagu weerarray mas’uuliyiin ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba.
Al-Shabaab weli waxay lee yihiin Faanoole faro kama qodna kuwa soo socda ayaa ka badan wax yeelada sidda uu sheegay afhayeenkooda Cali Dheere oo sheegay in weerarkii baarlamaanka ay ku dileen 32 askari oo labo ka mid ay yihiin AMISOM.
Si kastaba, Shabaab waay sheegeen in ay weerarkooda labo jibaari doonaan dowladana waa ay sheegtay ammaanka Muqdisho in aad loo xoojiyay balse ma jirto wax isbadal ah oo dhacay, waxaana dad badan ay lee yihiin waxaa jirra fashil xagga ammaanka oo la soo darsay dowladda.